Ny sensor Sony IMX789 dia hanomboka amin'ny OnePlus 9 miaraka amin'ny horonantsary 4K amin'ny 120 fps | Androidsis
Sony sensor IMX789 hanomboka amin'ny OnePlus 9 ary miaraka amina horonantsary horonantsary 4K amin'ny 120fps
Andrasana manodidina ny OnePlus 9, ary tsy natao ho tsinontsinona. Izahay dia miresaka momba ny sainan'ny mpanamboatra sinoa manaraka, ary iray amin'ireo finday andrasana sy mandroso indrindra amin'ity taona ity. Mazava ho azy, izany dia havoaka miaraka amin'ny Pro variant azy ary, raha ny filazan'ny fivoahana farany teo, finday iray izay ho tonga amin'ny OnePlus 9R.
Voalaza fa amin'ny 23 martsa dia hahita ny mazava izy ireo, saingy mbola tsy voamarina io na tsia. Toy izany koa, efa fantatsika ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka azy manokana sy ny mari-pahaizana teknikan'ny OnePlus 9, izay azo inoana fa haverina amin'ny ambaratonga lehibe kokoa na kely kokoa amin'ireo fitaovana roa hafa. Iray amin'ireto miresaka ireto momba ny fakantsary fakan-tsarimihetsika an-tariby, izay ho Sony IMX789 ary tonga miaraka amin'ny fahaizany misambotra mahavariana.
Sony's IMX789, izay hisantatra ny laharana amin'ny OnePlus 9, dia ho iray amin'ireo sensor tsara indrindra ho an'ny avo lenta
Ny horonan-tsary fampiroboroboana voalohany an'ny sensor an'ny IMX789 an'i Sony dia nihanazava, ary io ilay etsy ambany. Ny finday avo lenta voalohany hampiasana azy dia, araka ny efa nolazainay, ny OnePlus 9. Etsy ambany no ahitantsika ny fahaizany maka sary amin'ny endriny samihafa ary tsy manodikodina ny sary amina sary malalaka, 1% an'io eo aloha ihany. 10-20% ny solomaso mahazatra.
GSMArena Toy izao no anazavany azy: ity fakantsary ity dia mampiasa fakan-tsary roa apetraka amin'ny telefaona miaraka amin'ny prisma roa izay mamily ny hazavana amin'ny 90 °. Ny rafitra fanodinana sary dia hametaka ny sary miaraka amin'ny fotoana tena izy mba hamoronana panorama fanampiny malalaka miaraka amin'ny sehatry ny fomba fijery 140 °.
Satria ny Sony IMX789 dia hiorina amin'ny endrika fampisehoana 16:11, dia ho afaka hisambotra amin'ny endrika 4: 3 sy 16: 9 ihany koa, ny roa izay ampiasaina indrindra amin'ny sary mahazatra. Mandritra izany fotoana izany, ny fakantsary dia hanohana endrika endrika RAW 12-bit ary hizara ny haitao misy azy ho an'ny avo lenta i Hasselblad raha ny momba ny fanodinana loko. Tsy ny fakantsary aoriana ihany no hatsaraina, fa koa ny selfie, miaraka amin'ny antsipiriany avo lenta kokoa noho izay efa azontsika ao amin'ny OnePlus 8 sy ireo finday avo lenta avo lenta.
Toy izao no fijerin'ny OnePlus 9 Pro amin'ny sary tena izy: ny endriny sy ny fakantsary hampiasainy dia voasivana [+ Video]
Amin'ny lafiny iray, ny rafitra autofocus vaovao dia afaka miasa hatramin'ny 10 heny haingana kokoa noho ny fakantsary nentin-drazana; mila millisecond 1 fotsiny ity raha hamaly mahomby. Ho setrin'izany, ny halaviran'ny fifantohana farafaharatsiny dia nahena ho 15 cm (manodidina ny 6 santimetatra). Ny zavatra hafa dia ny telefaona miaraka amin'ny fandraisam-peo amin'ny famahana 4K amin'ny 120 fps (frame isan-tsegondra), zavatra azo atao ihany koa noho ny sensor IMX789, izay miaraka amin'ity haavo ity ary, ankoatry ny zavatra hafa, dia manana fikirakirana horonantsary HDR ara-potoana. tena izy, ISO zanatany roa, ary autofocus omni-directional pixel feno pixel.
Ireo fiasa hafa voalaza etsy ambony momba ny rafitry ny fakantsary OnePlus 9 dia misy maodely quad, izay mety ho azo amin'ny solomaso telephoto. Tselatra LED indroa sy fanatsarana ny fahaizan'ny sary sy ny horonantsary no voatonona ihany koa, amin'ny ankamaroan'ny toe-piainana ambany.
Tafaporitsaka ny OnePlus 9 Pro
Mikasika ny fiasa hafa sy ny pitsopitsony ara-teknika an'ny smartphone dia fantatra fa ny OnePlus 9 dia hamely ny tsena miaraka amin'ny chipset an'ny processeur Snapdragon 888 an'ny Qualcomm, octa-core izay manana ny fikirakira fototra toy izao: 1x Cortex-X1 amin'ny 2.84 GHz + 3x Cortex- A78 amin'ny 2.42 GHz + 4x Cortex-A55 amin'ny 1.8 GHz. Ho fanampin'izany, ny RAM sy ny fikirakirana toerana fitahirizana anatiny dia manomboka amin'ny 8 + 128 GB ka hatramin'ny 12 + 256 GB.
Ny batterin'ity finday ity dia hifanaraka amin'ny haitao haingam-pandeha 66 W an'ny orinasa, raha tsy latsaky ny 4.500 Mah ny fahaizany. Ny zavatra iray hafa dia ny fisian'ny port USB Type-C sy ny fanohanana ny haitao haingam-pandeha.
Ny efijery an'ity fitaovana ity dia ho an'ny teknolojia Super AMOLED, raha ny fanapaha-kevitra, na dia voalaza aza fa mety ho QuadHD +, dia hijanona ao amin'ny FullHD +, ary hamela ny 2K ho an'ny OnePlus 9 Pro. Eto koa izahay dia hanana tontonana misy 120 tahan'ny soda soda.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Sony sensor IMX789 hanomboka amin'ny OnePlus 9 ary miaraka amina horonantsary horonantsary 4K amin'ny 120fps
Ny fanavaozana vaovao 1.3 an'ny PUBG Mobile dia misy izao, ary ireo rehetra ireo no vaovao momba ilay patch
Oppo F19 Pro sy F19 Pro + 5G vaovao, telefaona roa mora vidy hatramin'ny 50 W